Izinhloso Zomthethosivivinywa WaseNew York Zokuqeda Ngokushesha Izimayini ZeBitcoin | Kusuka kuLinux
Umthethosivivinywa waseNew York uhlose ukuqeda okwesikhashana izimayini ze-bitcoin
Kusukela esemncane, umthelela wamandla we-bitcoin akayekile ukuxoxa, nakuba isihloko bekulokhu kukhulunywa ngemibiko ehlukahlukene eminyakeni edlule okuthi kwesinye isikhathi kuqhathaniswe amandla adingekayo kuma-bitcoins okumba izimayini nokusetshenziswa kwamandla minyaka yonke kwamazwe athile, akukaze kubangele izenzo ezibambekayo ngohulumeni.
Ngalesi sizathu, INew York State ithatha isinyathelo sokuqala yalolu hlobo lapho wethula isikweletu sokumisa izimayini ze-cryptocurrency eminyakeni emithathu ezayo ukuhlola kahle umthelela wayo kwezemvelo.
Futhi ukuthi ama-cryptocurrensets athola ukuthandwa futhi enza izindaba ngekota yokuqala ka-2021. I-Bitcoin, eyaziwa kakhulu kubo, ifinyelele phezulu ngaphezu kwezingu- $ 58,000 ngohlamvu lwemali ngoFebhuwari.
Le mali yedijithali yaziwa ngokuba nomthelela omkhulu wamandla emhlabeni. Izimayini zeBitcoin zinezindleko ezinkulu kwezemvelo kangangokuba imibiko eminingana ikhomba ukuthi izimayini zeBitcoin zinezici ezifanayo zekhabhoni njenge-Argentina. Ngokuzayo, ingadla amandla kagesi amaningi njengazo zonke izikhungo zedatha emhlabeni.
Ukuze ubone ngokucacile, USenator uKevin Parker wethule uBill 6486 kuKomidi Lokulondolozwa Kwezemvelo leNew York State Senate ukuze kuvinjelwe ukusebenza kwezikhungo zezimayini ze-cryptocurrency kuze kube yilapho izwe lingahlola umthelela wazo kwezemvelo.
Ngokuqondile, umthethosivivinywa uzovumela izwe laseNew York ukuthi limise ukumiswa kweminyaka emithathu ekusebenzeni kwezimayini kwenkampani ye-cryptocurrency. Lesi yisinyathelo sokuqala sohlobo lwaso selokhu kwavela ama-cryptocurrensets.
Kamuva umbuso uzokwenza ucwaningo olunzulu ngomthelela wezemvelo kumthelela wokukhishwa kwegesi engcolisa ukushisa okuvela kulesi sikhungo okuvela ezimayini, kanye nemiphumela yako kuzinga lamanzi, ikhwalithi yezemvelo, umoya kanye nezilwane zasendle.
Futhi kungukuthi i-bitcoin iyakhula yize kunemibiko nge-carbon footprint yayo, njengoba ifinyelele kafushane inani eliphakeme kakhulu lama- $ 64,000 ngaphambi kohlu oluqondile lukaCoinbase, ngaphambi kokuwa ngama-36% kuya ku- $ 47,000 cishe ezinsukwini eziyishumi kamuva.
Sekuyisikhathi eside kugxekwa izimayini zeBitcoin ngenxa yokusebenzisa kwayo amandla amaningi nomthelela wayo kwezemvelo, ngaphezu kweqiniso lokuthi uphenyo oluningi, kufaka phakathi ucwaningo oluvela eNyuvesi yaseCambridge, lukhombisile ukuthi izimayini ze-bitcoin emhlabeni wonke zisebenzisa amandla amaningi unyaka nonyaka kunezinye izizwe zonke.
NgoFebhuwari, kubika balinganisela ukuthi ukuxokozela kwama-bitcoins "okwami" kukhiqiza okufana ne-Argentina. Ngo-Ephreli, ukuhlaziywa okusha okushicilelwe ngumcwaningi waseDashi u-Alex de Vries, umsunguli we-Digiconomist, kukhombisile ukuthi ukukhuphuka kwentengo ye-bitcoin nakho kuholela ekusetshenzisweni kwamandla okuphezulu. Kusikisela ukuthi ukusetshenziswa kwamandla kagesi kwe-bitcoin kungasondela ekusetshenzisweni ngokuhlanganyela kwazo zonke izikhungo zedatha zomhlaba ezihlanganisiwe, futhi kungaba nomthelela omkhulu kakhulu kwezemvelo nakwezepolitiki zomhlaba.
Imayini ye-Cryptocurrency ihlanganisa ukushoda kwe-chip yomhlaba futhi kusongela ngisho nokuvikeleka kwamazwe omhlaba. Lesi yisiphetho sokuphawula kuka-Alex de Vries esihlokweni sakhe esithi "Bitcoin Boom:
okusho ukuthi ukwanda kwamanani okusetshenziswa kwamandla avela kugridi ”, okushicilelwe kumagazini iJoule. NjengoBill Gates, usozigidi uCharlie Munger ucabanga ukuthi "i-bitcoin iyanengeka futhi iphikisana nezintshisekelo zempucuko yethu." Ngalo mqondo, wahlulela ukuthi i-bitcoin ayilungile emhlabeni. "Ngiyakuzonda ukuphumelela kwe-bitcoin futhi angihambisani nemali esebenziseka kakhulu kulabo abaphula umthetho," esho.
Umbiko uzohambisana nesikhathi sezinsuku ezingu-120 sokuphawula komphakathi nokulalelwa okungenani okukodwa esidlangalaleni. Lo mthethosivivinywa uza ngesikhathi lapho imboni ye-cryptocurrency ichuma, ukukhula kukhuthazwa yiBitcoin ne-Ethereum, inani layo ebelikhula ngokushesha kusukela ngo-Ephreli.
Inkampani yabazali besitshalo, iGreenridge Generation Holdings, kulindeleke ukuthi iphumele obala ngokuhlangana e-United States kulo nyaka.
Ngemuva kokutholwa, izikhungo zezimayini ezithathwa njengeziyingozi, okungukuthi, lezo eziphazamisa umbuso emigomweni yayo yokukhishwa ebekwe kuMthetho Wobuholi Bezulu Nezokuvikelwa Komphakathi we-2019, ngeke zithole izimvume ezidingekayo zokuphinda zisebenze.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Umthethosivivinywa waseNew York uhlose ukuqeda okwesikhashana izimayini ze-bitcoin
Izimakethe kanye neCointop: 2 i-GUI nezinhlelo zokusebenza ze-CLI zokuqapha ama-Cryptocurrensets